DFP : “Fanamparam-pahefana ny fisamborana an’i R. Augustin” | NewsMada
DFP : “Fanamparam-pahefana ny fisamborana an’i R. Augustin”
Mbola resabe ny amin’ny “Raharaha Andriamananoro Augustin”. Fanamparam-pahefana ny fisamborana, raha ny fijerin’ny DFP.
“Efa fanamparam-pahefana amin’ny fahafahana maneho hevitra ny fisamborana an’Andriamananoro Augustin. Izay mety amin’ny fanjakana hatrany no atao: samborina izay manao hetsika an-dalambe. Nefa voaaron’ny Fifanarahana Cotonou izany. Tsy voahaja eto amintsika ny fahafahana fototra, ny zon’olombelona… ”
Io ny fanehoan-kevitry ny mpitarika ny hetsika Dinika ho fanavotam-pirenena (DFP), Ratolojanahary Maharavo, teny Ambohipo, ny faran’ny herinandro teo. Fanosihosena an-karihary ny Fifanarahana Cotonou ny “Raharaha Andriamananoro Augustin”. Ny didy 62-048, izay mifehy ny hetsika fidinana an-dalambe eto Madagasikara: tsy azo atao, mila maka fahazoan-dalana. Zavatra tsy azo atao, akana fahazoan-dalana.
Hetsika an-dalambe no anenjehana azy
Enjehina Andriamananoro Augustin fa nanao hetsika an-dalambe tany Soamahamanina. Nefa mifanohitra amin’ny Fifanarahana Cotonou izany. Manome lanja ny zon’olombelona sy ny fahafahana fototra rehetra amin’ny fanehoan-kevitra io Fifanarahana io. Ao anatin’izany ny fahafahana manao hetsika.
Nitenenan’ny DFP fametrahana fitarainana amin’ny Vondrona eoropeanina izay. Tsy raharahan’ny mpitondra io, rehefa atao samy raharahantsika eto. “Izay ny olantsika. Tsy mijery afa-tsy ny lalàna ato anatiny isika, ataon’ny mpitondra amboletra: gadragadraina eto avokoa isika rehetra”, hoy izy.
Tsy hahazoana famatsiam-bola ny fitondrana ratsy tantana
Tsy nahazontsika famatsiam-bola hatramin’izay ny fitondrana ratsy tantana amin’ny lafiny rehetra: tsy misy fanajana zon’olombelona, ny foto-kevitra demokratika, ny tany tan-dalàna, ny fitantanana tsara ny raharaham-panjakana, ny ady amin’ny kolikoly.
Vao notakin’ny Vondrona eoropeanina ny fananganana ny Fitsarana avo (HCJ), fa misy ny halatra azo itsarana ny mpitondra. Mila mandinika lalina ny fanjakana, hiantso ny hery politika hanarenana izany: hahatonga ny famatsiam-bola.
Nefa mifanohitra amin’izany ny fihetsiky ny fanjakana: nanaiky ny fepetra hahazoam-bola, ny 1 sy 2 desambra, nanaiky tamin’ny dinika politika fa tsara ny fiaraha-miasa, ny 9 desambra. Tsy matotra ny fanjakana fa tsy te hisahirana amin’ny programa fanarenana.